How'd it happen and more reports?: အင်တာနက် စာမျက်နှာများ လျှို့ ဝှက်ဖတ်ရှုနည်း
မြင်းခြံမြို့လေးမှာတော့ မြင်းခြံခေါက်ဆွဲသုတ်၊ ပလာတာသုတ်၊ မုန့်တီသုတ်(မုန့်ဟင်းခါးသုတ်) က နာမည်အရမ်းကြီးပါတယ်.. အခုတော့ မြင်းခြံေ...
အကြီးစားပြုပြင်ပြောင်းလဲရန် လိုအပ်နေသော မြန်မာနိုင်ငံပညာရေးစနစ်
ဆရာကြီး ဒေါက်တာမောင်သိန်း၏ ၁၊ စက်တင်ဘာ၊ ၂၀၁၂ ရက်နေ့၊ ကုန်သည်စက်မှု အသင်းချုပ်ခန်းမတွင် ဟောပြောခဲ့သည့် “အကြီးစားပြုပြင် ပြောင်းလဲရန် လိုအပ်...
အင်တာနက် စာမျက်နှာများ လျှို့ ဝှက်ဖတ်ရှုနည်း
RFA အင်တာနက် စာမျက်နှာတွေကို မြန်မာပြည်တွင်းက ကြည့်လို့မရအောင် ပိတ်ဆို့ ထားတာ ရှိကောင်း ရှိပါလိမ့်မယ်။ ဥပမာဆိုရင်၊ http://www.rfa.org/burmese ကို မကြည့်နိုင်အောင် လုပ်ထားနိုံင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့၊ အဲဒီ အင်တာနက်စာမျက်နှာတွေကို တိုက်ရိုက်မသွားပဲ proxy server လို့ခေါ်တဲ့ ကြားခံကွန်ပြူတာ ဆာဗာစနစ်ကို အသုံးပြုပီး ကြည့်နိုင်တဲ့ နည်းလမ်းရှိပါတယ်။ အဲဒီလို
ကြားခံ ကွန်ပြူတာဆာဗာကတဆင့် သွားမယ်ဆိုရင် ပိတ်ဆို့ ထားတဲ့စာမျက်နာတွေ ကို ကြည့်နိင်တဲ့အပြင် ဘယ်သူဘယ်ဝါမှန်းလည်း မသိနိင်ပါဘူး။ ကွန်ပြူတာ အသုံးပြုသူဟာကြားခံကွန်ပြူတာထဲကို ဝင်ပြီးတဲ့နောက် ကိုယ်ယောင်ဖျောက်ပြီးတော့တခြားပိတ်ဆို့ ထားတဲ့ အင်တာနက် ဝက်ဘ်ဆိုက်တွေကို သွားတဲ့ သဘောပါပဲ။
အခုလို ကြားခံဆောင်ရွက်ပေးမဲ့ ကြားခံကွန်ပြူတာ ဆာဗာတွေကို အင်တာနက်ဝက်ဘ်ပေါ်မှာ ရှာဖွေ နိုံင်တဲ့နည်းလမ်းတွေ ရှိပါတယ်။
Google, Yahoo, MSN/Live စတဲ့ ရှာဖွေရေးစနစ်တခုခုကို သုံး ပြီး ရှာရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရှာရမဲ့ စာလုံးတွေကတော့nph-proxy ဒါမှမဟုတ် nph-proxy.pl ဒါမှမဟုတ် nph-proxy.cgi တို့ ကို ရိုက်ထည့်္ဘပြီး ရှာကြည့်ပါ။
တခြားနည်းတခုအနေနဲ့CGIProxy ဒါမှမဟုတ် CGI Proxy ဆိုတဲ့ စာလုံးတွေနဲ့ လည်း ရှာနိုံင်ပါတယ်။
အဲဒီလို ရှာလိုက်တဲ့အခါ ကြားခံကွန်ပြူတာ ဆာဗာအဖြစ် လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးမဲ့ အင်တာနက်ဝက်ဘ်ဆိုက်တွေကို တွေရပါလိမ့်မယ်။ ဒါမှမဟုတ် ကြားခံကွန်ပြူတာဆီကို သွင်းနိုိုံင်တဲ့ link လမ်းကြောင်းကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ ဝက်ဘ်ဆိုက်တခုခုကို ဝင်ပြီးတဲ့အခါမှာ ကိုယ်သွားလိုတဲ့ အင်တာနက် ဝက်ဘ်ဆိုက်ရဲ့လိပ်စာကို ထည့်သွင်းရမဲ့ ကွက်လပ် တခြား proxy လိပ်စာများ
http://proxify.com/ (This is free but there is alsoaversion available forafee.)
ProxyServer ကြားခံ ကွန်ပြူတာ ဆာဗာတွေရဲ့ လိပ်စာက အမြဲတမ်း ပြောင်းလဲနေပါတယ်။
ဒါပေမဲ့အခုနည်းအတိုင်း ရှာကြည့်္ဘပီးပြင်ပကမ္ဘာကြီးထဲက အင်တာနက်လောကကို လွတ်လွတ်လပ်လပ်
Posted by Ko Nge at Monday, September 08, 2014
URGENTLY REQUIRED 6G WELDERS
၂၀၃၅ခုနှစ်မှာ စီးရတော့မဲ့ မဟာမြိုတော်ဟောင်းရန်ကု...
CPF ဆိုတာဘာလဲ ?
စင်ကာပူတွင် အိမ်ဝယ် ဘယ်လိုဝယ်မလဲ?
အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေး ကော်မရှင် အလုပ်ဖြစ်ရဲ...
ရန်ကုန်နှင့် မြို့ကြီးများဆီသို့ လိုင်စင်မဲ့ကားတွေ...
၂၀၁၄ခုနှစ်မှာ မြန်မာ အိမ်ခြံမြေ ရွှေခေတ်လို့တောင်...
ကစော် (သို့) လှော်စာ
ပုလဲမြို့သစ်က လမ်းမတန်းမြေဈေးတွေ သိန်း၊သောင်းဂဏန်း...
မြန်မာနိုင်ငံ၏ အနာဂတ်ကို တည်ဆောက်ခြင်း
Change the Screen Shot Save File Location in Mac O...
iOS 8 က မြန်မာစာပါတဲ့ကီးဘုတ် Black Keys!
မြူတိမ်ဝေဝေ တောင်ခိုးဝေးဝေး - အပိုင်း ၁မှ ၂၉ ထိ...
My Life asaShan Princess- အင်ဂျီ (မဟာဒေဝီ စဝ်သုစ...
တကယ်ယုံကြည်ရမှလား? တန်ဖိုးနည်း တိုက်ခန်းတွေ!
မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဒေသ ၁၅၃ ခုကို နိုင်ငံခြားသားများ ...
Graphic: How do the iPhone6and Apple Watch compa...
iOS 8 မှာ Third-Party Keyboard ထည့်သွင်းနည်း!
အိမ်ရာနှင့် အဆောက်အအုံတည်ဆောက်ရေး စီမံကိန်းများ၌ အ...
လုံခြုံရေး မြှင့်တင်ထားသည့် ငါးထောင်တန်အသစ်များ အေ...
မိုက်ကယ်မိုးမြင့် (သို့မဟုတ်) ပြိုင်ဘက်ကင်း ရေနံသူ...
စကာင်္ပူက Singtel Stock Share လေးတွေကို ဘယ်လိုဝယ...
အများပိုင်ကုမ္ပဏီများ ရှယ်ယာထုတ်ရောင်းမှုများလာ၍ ခို...
စကာင်္ပူက တယ်လီဖုန်းလိုင်း ၃ခု က ၂နှစ် စာချုပ်နှင...
Lemon Law ခေါ် အချဉ် ဥပဒေ
စင်ကာပူရှိ နိုင်ငံခြားသားအလုပ်သမားများကို နည်းမျိ...
Compare iphone6plus anf Samsung Galaxy Note 4!
Foreign Domestic Workers (အိမ်အကူ၊ အိမ်ဖောလုပ်ငန်း...
ရန်ကုန်မြို့သစ်စီမံကိန်း ဧရိယာအတွင်းရှိ လယ်ယာမြေမျ...
ကမ္ဘာ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် အခက်အခဲဆုံးနိုင်ငံတွင်ြ...
နိုင်ငံခြား တိုက်ရိုက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် မြန...
အွန်လိုင်း အခမဲ့ ဗီဒီယိုများ! Online Free Movies...
မြန်မာပြည်ဟာ ပျက်စီး ဆုတ်ယုတ်တဲ့ လမ်းကြောင်းနဲ့ ...
မြန်မာ့လက်ဖက်စိုနှင့် လက်ဖက်ခြောက် ပြည်ပဈေးကွက်ရရ...
ကြက်တောင်ပံ အစားသွပ်ကြော် (ထိုင်းစတိုင်)
ဒီမှာ သင်တို့ရဲ့ဆန္ဒလေးတွေ နှင့် Vole! ပေးပြီးအားေ...
မြန်မာ နိုင်ငံခြားသား ခရီးသွားများအနေဖြင့် နိုင်ငံ...
အာဏာရှင် ဖန်တီးတဲ့ စားသုံးကုန်ဈေးနှုန်း
Online Free Movice Put Locker!
Myat Su Mon posted blog posts